दिपकराज गिरीले त होल्ड गरेकै हुन् तर पाइरेसिले मार्यो ? - Reel Mandu
दिपकराज गिरीले त होल्ड गरेकै हुन् तर पाइरेसिले मार्यो ?
दिपकराज गिरीलाई दर्शकले पैसामुखी भएको आरोप लगाउदै आएका छन् र यो आरोप लगाउनुको पछाडी दिपकले आफ्नो फिल्म चाडो युटुबमा रिलिज नगर्नु हो। तर, कहिले सम्म युटुबमा फिल्म नहाल्ने ? युटुबमा फिल्म नहालेर अन्य एपबाट फिल्म हालेपछि बिदेशी भूमिमा बसेर युटुबमा फिल्म हेर्न बाध्य भएका नेपाली दर्शकहरु भने दिपक देखि निकै रिसाएका थिए।
अर्को कुरा दिपकले युटुबमा फिल्म रिलिज गर्न जति नै होल्ड गरेपनि आखिर पाइरेसीले उनका फिल्महरु युटुबमा छ्याप-छ्याप्ती भेटिन थालेपछि दिपकले उनको पछिल्लो चलचित्र ‘छ माया छपक्कै’ हलमा प्रदर्शन भएको एक बर्ष नबित्दै युटुबमा अपलोड गरेका छन्। दिपकराज गिरि पाइरेसी देखि डराएका हुन् कि दर्शको इछ्या अनुसार फिल्मलाई युटुबमा चाडो हालेका हुन् त ?
उनले आफ्नो चलचित्र ‘छक्का पन्जा – ३’ लाई युटुबमा हाल्न ३ बर्ष लगाएका थिए। आखिर पाइरेसिले दीपकराज गिरीलाई युटुबमा फिल्म चाडै हाल्न बाध्य बनाएकै हो त ? तर ज होस् बिदेशी भूमिमा बसेर युटुबमा फिल्म हेर्न बाध्य दर्शकहरु भने नया चलचित्र चाडै युटुबमा आउनाले खुसि नै छन्। यो कुराले दिपक कति खुसि छन् त्यो समयले बताउला।